အိုးဝေ: ချွဲခြင်း အနုပညာ
Posted by ဇနိ at 8:57 PM
khin oo may August 23, 2008 at 10:05 PM
တို.ကိုတော.သူငယ်ချင်းတွေ က ၁၂ ကြီူးတတ်တယ်လို.ပြောကြတာဘဲ..
Yu Wa Yi August 23, 2008 at 11:42 PM
(ဟီးဟီး ကျနော့် စိတ်ထဲ ထင်တာ ပြောတာ။ တကယ်က ဟုတ်လောက်ဘူးရယ်။)တဲ့ ကိုဇနိပြောဟန်လေးကြည့်ရတာ အညာကိုတောင်သတိရ
သွားတယ်။ အညာသားမဟုတ်ရင်လည်း ဆောတီးနော်။ ဒီလိုပေါ့လေ..မဇနိကိုသတိတွေရ
နေတော့လည်း ချွဲတာလေးတွေ ပြန်တွေးမိလို့ ရေးမိတာပေါ့။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်
My Wonderful Moral Thoughts August 24, 2008 at 2:37 AM
"ခစ် ခစ် ခစ်" :))
Andy Myint August 24, 2008 at 3:41 AM
ကိုဇနိ... ကိုဇနိ... ဒီလိုတွေနဲ့ မဇနိကလည်း တမ်းတမ်းစွဲပေါ့။
ZZA August 24, 2008 at 3:55 AM
ချွဲခြင်း အနုပညာ အပိုင်း(၂) ကို ဆက်မျှော်နေပါတယ်....ဟီးဟီး..
Republic August 24, 2008 at 9:09 AM
ကိုဇနိ တော်တယ် ၊၊ စိတ်ကူးလေးကောင်းပါတယ် ၊၊ တစ်ဦးကို တစ်ဦး မေတ္တာတရား ၊အပြန်အလှန် နားလည်မှု ၊ လေးစားမှုတွေနဲ့ လက်တွဲကြတာ အကောင်းဆုံးပါ ၊၊
ရွှန်းမီ August 24, 2008 at 9:30 AM
Lecture တက်သွားတယ်..။ Tutorial တော့ မလုပ်ရသေးဘူး..။ အဟဲ။
Heartmuseum August 24, 2008 at 9:49 AM
ချွဲနည်း လာသင်တယ်ဗျ.... ဆရာဇနိ
တားမြစ် ထားသော... August 24, 2008 at 10:10 AM
"အပေးအယူ လွန်ကြည်ဖြူ" ဆိုတာ နှစ်ကိုယ်တူ ဘဝမှာ အလွန်အရေးကြီးတာပါ။
ဒီစာစုလေးကို ဖတ်ရမှ ကျွန်တော်လည်း ရည်းစားမရသေးတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နားလည်ပါတော့တယ်။ ခက်နေတာက ချွဲတာကလည်း အနုပညာတဲ့ဗျာ... အနုပညာနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ဘယ်လိုမှအစေးကပ်တာ ဟုတ်ဘူး။
တတ်နိုင်ဘူး။ အားကိုးရှာရမှာပဲ။ သင်ပေးလို့ရရင် ကိုကိုနိ သင်ပေးစေချင်တယ်။ အားကိုးပရစေဗျာ။ နော့။
မောင်ဖြူ August 24, 2008 at 10:14 AM
ဆရာနိကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ချွဲခြင်းအနုပညာတွေအတော်ကျွမ်းနေပြီပဲ။ ကျွန်တော်တောင် ရုံးပတီသီးစားချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။ :P
nu-san August 25, 2008 at 7:29 AM
ကိုဇနိရေ.. ရည်းစားပဲဖြစ်ဖြစ် လင်မယားပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစု ညီအကို မောင်နှမတွေ အချင်းချင်း ချွဲကြတာက အမှန်တန် ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်.. အဟီး.. အမမြင်ဖူးတာတော့လေ.. ယောင်္ကျားလေးတွေအချင်းချင်းကို ချွဲတာ မြင်ဖူးတယ်။ ဒီပို့စ်ရဲ့အောက်မှာ.. caution လိုမျိုးရေးထားပေးရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်.. :D :P အလကားစတာပါ။ ချွဲတာဆိုလို့ သတိရလို့ ရေးလိုက်မိတာ..
ကိုဇနိတို့ မဇနိတို့အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာ ရီလည်းရီရတယ်.. ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်... မဇနိရေ.. သင်တန်းလေး ပေးပါဦး.. :D :D
မြရွက်ဝေ August 25, 2008 at 9:49 AM
အဟမ်း....အဟမ်း........ အဟွတ်!! (ချွဲတွေ ကြပ်နေလို့) :D
ချစ်တတ်သောသူများ ချွဲ၏ လို့ ပြောရင် မချွဲတတ်တဲ့သူက မချစ်တတ်သလို ဖြစ်သွားဦးမယ်။ အချစ်ခံချင်သူများ ချွဲ၏လို့ ပြောင်းပြောလိုက်မယ်။ တို့ကတော့... တို့ကတော့.... ရိုးရိုးချွဲ၊ ငေါက်ချွဲ၊ ကြောက်ချွဲ အစုံအပြင် "ရစ်ချွဲ"တောင်ပါလိုက်သေးတယ်။ :P
ဇနိ August 25, 2008 at 12:02 PM
အမခင်ဦးမေရေ ကျနော်တို့က ၂ ယောက်ပေါင်း ၂၄ ကြိုး။
အမယုဝရီ - ကျနော်ရော မဇနိရောက အညာသားဗျ။ ချွဲတာတွေကို သတိရလို့ ပြန်ရေးလိုက်တာ ဟုတ်တယ်ဗျ။
SMNTL - သဘောတွေကျလို့ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။
ကိုအန်ဒီကြီး - ကျနော်လည်း သူမကို တမ်းတမ်းစွဲပါပဲဗျ။ အဟီး
Zza - တတ်တာအကုန်ရေးလိုက်တော့ ၂- ရေးစရာ ကုန်သွားပေါ့။ နောက် ထပ်ပေါ်လာရင်တော့ ရေးဦးမယ်။
ကိုကြီးဝီ - အမြဲလာဖတ်လို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။ ကွန်မန့်လေးအတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွှန်းမီရေ - လက်တွေ့လေးပါတွဲလိုက်နော်။
Heartmuseum - မတွေ့တာတောင်ကြာပေါ့။ ချွဲစရာလူမရှိရင် အမေ့ကို ပြန်ချွဲ။ အမေနဲ့လေ့ကျင့်ရင်း ကောင်မလေးရှာ။
ကို VBT - သူက ကျနော့်ဆရာကိုး။ လူနောက်ကြီး။ တပည့်ပြန်လာလုပ်ချင်နေတယ်။
မောင်ဖြူရေ - ခင်ဗျားလည်း ကျနော့်နီးနီးပါဗျာ။ ချွဲတာကို ပြောတာနော်။
အမကြီး နုစံရေ - ယောက်ျားလေးအချင်းချင်း ချွဲတာကို ရေးဖို့မေ့သွားတာ။ ဟိ ဟိ။ အမပြောမှ ဒါလည်းရှိတာ ဟုတ်သားပဲနဲ့ သတိရတာ။
မြရွက်ဝေ ပိုပြီး ဆရာကျတယ်နော်.. ရစ်ချွဲတဲ့။
tmn August 25, 2008 at 8:59 PM
ကိုဇနိ...မန်းတလေးကနေ ရန်ကုန်ကိုဆင်းတော့ မဇနိကို သွားပြီးရစ်နေတယ်ထင်တာ.... အခုမှပဲသိရတော့တယ်...ချွဲနေတာကိုးဗျ.... :P
လွင်ပြင် August 26, 2008 at 3:45 AM
ချွဲခြင်း အနုပညာလေး သင်ပေးပါ..
အဲဒီ ပညာလေးတွေပါ သင်ပေးပါနော်…အကို
Nu Thwe August 26, 2008 at 4:13 PM
ကျမက လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကို စိတ်ဝင်စားတော့ ဒီစာစုလေး ဖတ်ရတာ သိပ်သဘောကျပါတယ်။ တွေးတတ်ရေးတတ်သူများလက်ထဲရောက်ရင် အကြောင်းအရာအားလုံး လှပသွားတာပဲကိုး။